Tag: xiriiriye | Martech Zone
9 Sababood oo ah Sababta Maalgalinta loogu Sameynayo Barnaamijka Soo-Gudbinta Suuq-geynta Waa Maalgashiga Ugu Wanaagsan ee Kobcinta Ganacsigaaga
Marka laga hadlayo koritaanka ganacsiga, adeegsiga tikniyoolajiyaddu waa lama huraan! Laga soo bilaabo hooyo yar iyo dukaamo caan ah ilaa shirkado waaweyn, waa wax aan la dafiri karin in maalgashiga tikniyoolajiyaddu ay bixiso wax badan iyo in milkiileyaal badan oo ganacsi aysan ka warqabin culeyska maalgashi ee tiknoolajiyaddu wadato. Laakiin ku sii jiritaanka kor u qaadista tikniyoolajiyadda iyo softiweerka ma aha hawl fudud. Ikhtiyaarro aad u tiro badan, xulashooyin badan… Maalgelinta ku habboon softiweerka suuq geynta ee ganacsigaaga waa mid muhiim ah oo
Sidee Suuq-geynta Teknolojiyadda Deepfake u saameyn ugu yeelan doonaa?
Arbacada, December 30, 2020 Arbacada, December 30, 2020 Douglas Karr
Haddii aadan weli isku dayin, waxaa laga yaabaa in barnaamijka moobiilka ee aan ugu xiisaha badnaa sannadkan uu yahay Reface. Codsiga moobiilka ayaa kuu oggolaanaya inaad wejigaaga qaadatid oo aad beddesho wejiga qof kasta oo sawir kale ama fiidiyow kale ku jira keydkooda xogta. Maxaa loogu yeeraa Deepfake? Deepfake waa isku-dar ah ereyada 'Deep Learning and Fake'. Deepfakes waxay ka faa'iideysaneysaa barashada mashiinka iyo sirdoonka macmalka ah si loogu maareeyo ama loo soo saaro nuxurka muuqaalka iyo maqalka leh
Tilmaamaha loogu talagalay Naqshadeynta Wadahadalka ee Chatbot - Laga soo bilaabo Landbot
Talaado, Nofeembar 10, 2020 Talaado, Nofeembar 10, 2020 Douglas Karr
Chatbots waxay sii wadaan inay sii kordhayaan oo casri ah waxayna siiyaan khibrad aad u tiro badan oo aan xaddidneyn oo loogu talagalay booqdayaasha goobta marka loo eego sidii ay sameeyeen xitaa sanad ka hor. Naqshadaynta wada sheekaysiga ayaa udub dhexaad u ah hawlgal kasta oo hawlgal ah oo chatbot ah iyo guuldarro kasta. Shabakadaha loo yaqaan 'Chatbots' ayaa loo daad gureeyay si otomaatig ah loo qabto hogaaminta iyo u qalmida, taageerada macaamiisha iyo su'aalaha inta badan la isweydiiyo (FAQs), otomaatiga saaran gawaarida, talooyinka wax soo saarka, maareynta shaqaalaha iyo qorista, sahaminta iyo su'aalaha, ballansashada, iyo boos celinta. Filashada booqdayaasha goobta
Samee Buug Khadka tooska ah ee loogu talagalay WordPress oo leh 'GravityView'
Haddii aad qayb ka ahayd beesheena in muddo ah, waad ogtahay sida aan u jecel nahay Foomamka Cuf-isjiidadka qaab dhismeedka iyo xog ururinta WordPress. Waa uun madal qurux badan. Waxaan dhowaan isku daray Foomamka Cuf-isjiidadka iyo Hubspot ee macmiilka ah waxayna u shaqeysaa si qurux badan. Sababta ugu muhiimsan ee aan u door bido Foomamka Cuf-isjiidka ayaa ah inay dhab ahaan keydineyso xogta gudaha. Dhammaan isku dhafka Foomamka Cuf isjiidka ayaa markaa xogta u gudbin doona
Aadamuhu Runtii Waa Inuu Si Wanaagsan Ugu Dhaqmo Warbaahinta Bulshada
Isniin, November 13, 2017 Isniin, November 13, 2017 Douglas Karr
Shir dhawan socday, waxaan la yeelanayay dood aan la yeeshay hogaamiyaasha kale ee baraha bulshada ku saabsan jawiga aan caafimaadka qabin ee kusii kordhaya baraha bulshada. Maaha wax badan oo ku saabsan kala qaybsanaanta guud ee siyaasadeed, taas oo ah mid iska cad, laakiin waxay ku saabsan tahay shaabbadaha cadhada ee lagu qaado mar kasta oo arrin muran dhaliso ay timaaddo. Waxaan adeegsaday ereyga stamp maxaa yeelay taasi waa waxa aan aragno. Mar dambe kama joogsanayno inaan baarno arrinta, sugno xaqiiqooyinka, ama xitaa falanqeyno macnaha guud ee